Turkiga Ayaa Qabtey xubnood ka tirsan Daesh oo rabay in ay weeraran Saldhiga Incirlik -
Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo 1,500 oo haamo Oksajiin ah ku…
Alshabaab oo shan ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo ku toogtay…
Ilhan Cumar oo markale dalabtay in tallaabo laga qaado Dhaxalsugaha Sacudi…
Rockets hit Iraqi base hosting US troops days before the pope’s…
Sarkozy convicted: What does that mean for politics and justice in…
Myanmar police fight protesters when ASEAN’s diplomatic efforts stop
Home News Turkiga Ayaa Qabtey xubnood ka tirsan Daesh oo rabay in ay weeraran...
Turkiga Ayaa Qabtey xubnood ka tirsan Daesh oo rabay in ay weeraran Saldhiga Incirlik
Booliska Turkiga waxay soo qabqabteen ku dhawaad 36 xubnood oo looga shakisanyahay inay ka tirsan yihiin Daesh, kuwaas oo ay ku jiraan qaar qorsheynayay inay afduubtaan xildhibaano iyo aqoon yahano isla markaana weeraraan Saldhigga Cirka ee Incirlik, howlgalada argagixiso la dirirka ee ka socda gobolada Istambul iyo Adana.
Sida lagu sheegay bayaanka booliska, howlgalada waxaa loo fulinayey in lagu soo qabto tuhmanayaasha argagixisada Daacish oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisada ee ka hawlgasha Syria.
Booliisku waxay hawlgalo isku mar ah ku qaadeen 17 bartilmaamed oo ku yaal 11 degmo oo ka tirsan magaalada Istanbul, halkaas oo ay ka soo qabqabteen 17 tuhmane argagixiso.
Magaalada Adana, booliska ayaa ku soo qabtey 19 tuhmane oo kale kuwaas oo la sheegay in ay qorsheynayeen in ay afduubaan xildhibaanada,aqoon yahano iyo saraakiisha garsoorka.
Dukumiintiyo lagala wareegay intii ay socdeen weerarada ayaa sidoo kale lagu ogaaday in argagixisada ay qorsheynayeen inay weerar ka geystaan ​​Saldhigga Cirka Mareykanka ee Incirlik ee magaaladaas ku yaal (Incirlik Air Base).
Booliska ayaa helay 500 garaam oo walxaha qarxa ah, hub aan sharciyeysneyn, dukumiintiyo abaabul iyo agab dijitaal ah oo ay leeyihiin argagixisada DAACISH.
Tuhmanayaashu waxay hawlgal ku fulinaayeen magaca DAACISH, oo ay ku jiraan jirdil ay u gaysanayeen shaqsiyaad ay u arkeen inay aflagaadeeyeen qiyamka diinta.
Bishii Sebtember, booliska Turkiga waxay xireen shakhsigii ugu sarreeyay kooxda argagixisada ee dalkaas, Mahmut Özden, oo loo arko inuu yahay “amiirka Turkiga” ee Daesh ee magaladda Adana.
In kasta oo kooxda argagixisada si weyn logaga adkaaday Ciraaq iyo Suuriya, joogitaankeedu wali khatar buu u leeyahay gobalka, maaddaama shaqsiyaadka raacay fikirkooda ay kuwa kale ku dhiirrigeliyaan in ay gumaad sameeyaan.
Falanqeeyayaasha reer Yurub ayaa sidoo kale ka digay weerarada ay geysato kooxda Daesh, Madama shaqsiyaadka aysan waxda sirdoonka aysan ka warqabin in ay noqdeen kuwa ku badan ee faldambiyeedyadda geysta.
Turkiga ayaa Daacish u aqoonsaday koox argagaxiso ah sanadkii 2013-kii wixii markaa ka dambeeyayna marar badan ayaa la soo weeraray, oo ay ka mid yihiin 10 qaraxyo ismiidaamin ah, toddobo qarax iyo afar weerar hubaysan, oo ay ku dhinteen 315 qof boqolaal kalena ku dhaawacmeen.
Haddaba sii uu uga Jawaabo, Turkigu wuxuu bilaabay hawlgallo milatari iyo boolis gudaha iyo dibeddaba, isagoo soo qabtay xubnihii ugu sarreeyay Daesh dadaallada argagixiso la dagaallanka ee dalka gudihiisa iyo Suuriya.
Sirdoonka Turkiga ayaa door muhiim ah ka qaatay dhimashadii hogaamiyaha DAACISH Abu Bakr al-Baghdadi iyaga oo qabtey una gacan geliyay mid ka mid ah kaaliyeyaashiisa Ciraaq, kaas oo maamulka Maraykanka siiyay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan sidii loo heli lahaa.
Sida laga soo xigtay tirokoobyada Wasaaradda Arrimaha Gudaha, ugu yaraan 2,000 oo qof ayaa la xiray halka 7,000 oo kalena la masaafuriyay hawlgallo ka dhan ah Daesh oo ka dhacay Turkiga dhowrkii sano ee la soo dhaafay, halka ku dhowaad 70,000 oo qof loo diiday inay galaan dalka sababo la xiriira tuhunno ay ka qabaan inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisada ah.
Previous articleMaamulka Warsheekh oo ka hadlay dil argagax leh oo ka dhacay duleedka Warsheekh
Next articleWararkii u dambeeyay doorashada Madaxweynaha Hirshabelle
Dagaal dhex maray cidamada Itoobiya iyo Sudan iyo Dowlada Masar oo heshiis milatari la saxiixatay Sudan
Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo 1,500 oo haamo Oksajiin ah ku wareejisay Isbitaalka Martiini
Alshabaab oo shan ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo ku toogtay Jilib